Atụmatụ na-eto eto nke kachasị iche clematis maka Urals - Clematis akuku - 2019
Clematis na Urals: kụrụ ma lekọta
Clematis bụ okooko osisi magburu onwe ya, mara mma nke ọma na okooko osisi. Iji nụchaa ịma mma nke osisi osisi a, ọ dị mkpa ka ị gbalịa itolite ya. Nnukwu mmiri, mmiri mmiri-ịda ada na-eme ka onye na-elekọta ubi na-elekọta osisi dị ka o kwere mee, ọ bụ ezie na, n'ụzọ, clematis adịghị mkpa nke a ma ọlị.
Ọ dị mkpa! Clematis bụ osisi na-egbu egbu. N'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na ọ dịkarịrị ize ndụ karịa osisi ndị ọzọ na-egbu egbu, ọ dị mkpa iji zere ịkpọtụrụ ya ihe ọṅụṅụ, n'ihi na ọ na-akpata akpụkpọ anụ na ọkụ. Chetakwa na ọbụna ntakịrị akwụkwọ clematis ma ọ bụ ihe ọṅụṅụ nwere ike ime ka ọbara ọgbụgba na eriri afọ.
Ntughari nke ihe omimi a agaghi eme ka o sie ike ma obu ihe ndi ozo di na ya, ya mere onye obula choro inwe obi uto nke okooko osisi ya nwere ike ibido clematis n'ubi ya.
Ịhọrọ ebe maka ịkụpụta clematis
Atụmatụ ọdịda nke clematis na Urals
Otu esi akụ mkpụrụ
Otu esi echekwa clematis na Urals
Ụzọ nke mmeputakwa nke clematis na Urals
Esi chebe osisi vaịn n'oge oyi
Clematis na Urals: ụdị kacha mma maka ịmalite
Ọnọdụ ihu igwe na Urals dị nnọọ njọ, ya mere enwere ike ikesa oke mmiri. Ndị bi na Urals kwesịrị iji ihe kacha mkpa maka ịhọrọ nke iche iche clematis.
Kedu nke kacha mma nhọrọ clematis maka Urals bụ ụdị Pita, ubi-vine ma mgbe ọ bụla, n'ihi na ha anaghị anabata oge oyi. O kwesịghị ekwesị maka ụdị ndị na-eto eto dị ka n'ebe ọwụwa anyanwụ, ọkụ ma odo odo, ebe ọ bụ na ntachi obi ha zuru ezu iji buru -20 Celsius C, na nke a ezughị ezu iji lanarị ihe ọkụkụ Ural. Osisi ndị dị otú ahụ ga-adị mma na greenhouses, greenhouses, ubi oyi ma ọ bụ dị ka pot osisi.
Kasị mma clematis iche maka Urals - ndị a bụ ndị na-eso nke abụọ na nke atọ, nke na-eme ka oge oyi bụrụ nke dị mkpirikpi ma ọ bụ wepụ kpamkpam. Ọtụtụ ndị clematis na-achọ ebe obibi dị elu maka oge oyi. Ọ bụrụ na anyị weere dị ka ihe ndabere nhazi nke umu na nne nne, mgbe ahụ maka Urals ọ na-atụ aro ịhọrọ ụdị ndị a:
Clematis Jakman ngwakọ iche ha bụ nnukwu osisi na-eto eto nke na-eto n'elu Ome ruo mita 4 n'obosara. A na-ekpuchi osisi ndị ahụ na-acha ahịhịa ndụ ma nwee usoro mgbọrọgwụ nke ọma. Ha adịghị mkpa nlekọta pụrụ iche na ọbụna na ha ga-enye gị ntakịrị anya na mma lilac okooko osisi na-eru 20 cm ke dayameta. Ụdị dịgasị iche iche a na-ahụ maka ọdịdị ya na ogologo oge. N'oge nkwadebe maka oyi, a na-egbutu osisi ahụ kpamkpam ma ọ bụ doo Ome agaghị adị karịa 30 cm.
Integrifolia (ngwakọ iche clematis) ndi choputara botanist ka ndi otu choro clematis, ndi nnochite anya ha nwere ike iru mita 2.5 n'ogologo. N'oge oge okooko osisi, osisi vine na-ejupụta na okooko osisi mara mma nke ruru ogo 12 cm.
Vititsella (ngwakọ iche odo odo clematis) - Ọ bụ ihe dị iche iche nke ohia. Osisi ahụ nwere Ome na-eru ogologo mita atọ, nke ụdị akwụkwọ dị ichiiche na okooko osisi ndị mara mma nke nwere ike iru 12 cm n'ịdị elu. Ha bụcha pink, odo odo na ọbara uhie. N'oge oge okooko, otu nnukwu ohia kpuchie ya na ọtụtụ narị okooko osisi.
Clematis woolly, Vititsella, Zhakmana, isi awọ, nwa agbọghọ na-amaghị nwoke, mkpịsị ụkwụ, pilchatolistnogo, Tangut nwere ike idi ọnụ ala na okpomọkụ ruo -27 Celsius C. Otú ọ dị Onye isi na-enweghị isi n'etiti ụdị dị iche iche nke kwesịrị ekwesị maka ịgha mkpụrụ na Urals, a na-ewere "Wil de Lyon" si na Vititsella, nke, ọbụna n'ọnọdụ kachasị njọ, ga-enwe obi ụtọ gị na okooko osisi carmine.
Mgbe kụrụ clematis na Urals, ọ dị mkpa iji nlezianya mee ihe na nhọrọ nke ebe a na-akọ ihe.
Ọ dị mkpa! Ọ bụrụ na ị ga-eto eto, cheta na osisi ahụ na-atụ egwu ifufe na ihe nfe, ya mere, ọ bụrụ na i mehiere na ịhọrọ ebe maka mpaghara gị, mgbe ahụ, osisi ahụ agaghị amasị gị ma ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ na ngwa ngwa.
Ebe osisi vine na-eto eto ga-akọrọ, n'enweghị mmiri na-asọ oyi na mmiri. Ọ bụrụ na ebe a họọrọ bụ ebe dị nso nke mmiri ala, mgbe ahụ, a ga-eji ihe mgbaru mmiri nke dịkarịa ala 20 cm mee ma ọ bụrụ na a ghaghị ịkwanye nkume ma ọ bụ brik batara. N'ihi eziokwu bụ na clematis bụ osisi vaịn, ọ chọrọ nzukọ nke nkwado. Na mbu, n'ezie, ị ga-ejikọta osisi ahụ, ma ka ọ na-etolite, ọ ga-amalite ịbanye na nkwado n'onwe ya site n'enyemaka nke mkpụrụ osisi petioles.
Clematis hụrụ ìhè, ya mere ebe maka ọdịda ya kwesịrị ịbụ anwụ na-acha ma chebe ya site na drafts na ifufe.
Na-emeghe ala kụrụ vine na ọdịda ma ọ bụ mmiri. Ọ bụrụ na ị zụtara sapling clematis na mbubreyo mgbụsị akwụkwọ, ọ ka mma prikopat ya ruo mgbe mmiri na ala na-emeghe ala na mbubata nke ụbọchị ọkụ. Ọ bụrụ na ị zụrụ ome na okpomọkụ, usoro mgbọrọgwụ nke dị na akpa mechiri emechi, mgbe ahụ, a kụrụ ya n'ala na ọdịda. Mgbe kụrụ na tupu ịmalite, osisi ahụ kwesịrị ịhazi shading dị elu, nke ga-echebe ya site na ìhè anyanwụ kpọmkwem. Ọ bụrụ na ị zụrụ mgbọrọgwụ na mgbọrọgwụ dị ntakịrị, mgbe ahụ iji mee ka osisi ahụ dịkwuo elu, ọ ghaghị itinye ya maka awa 6 ruo 8 n'ime mmiri nke Epin kwukwara.
Mgbe ị na-ahọrọ clematis seedlings, cheta na iji nwee ike idozi na Urals na nchịkọta nsogbu na nsogbu, ọ dị mkpa iji nlezianya nyochaa ala na rhizome maka ọnụnọ nke mmebi, nakwa nke mmeri na-efe efe. Ọ bụrụ na ị hụ ọnya na-adịghị agwọ ọrịa na nje mgbe ị zụtara ya, mgbe ahụ, o yiri ka ero ahụ emetụta osisi ahụ, ya mere ọ ka mma ịjụ ịzụta ya.
Jiri nlezianya nyochaa rhizomes nke seedlings. Ị nwere ike ịzụta puo n'enweghị ihe ọ bụla, ma ọ bụrụ na ekpuchi isi mgbọrọgwụ nke obere mgbọrọgwụ, adịghị akpọnwụ, enweghị mgbochi na ọnya na ire ere ma ọ bụ ebu. Ọ bụrụ na ị belata bụ naanị isi mgbọrọgwụ, nke na-enweghị alaka ndị ọzọ, mgbe ahụ, ọ ga-esighi elu ma ọ bụ na ọ ga-afụ ụfụ ruo ogologo oge.
Clematis bụ ihe na-adịghị mma, ma ọ dị ezigbo nhịahụ banyere oke ala. Osisi ahụ na-ahọrọ ihe ọkụkụ, nke ọma na nke nwere ume. Ọ bụrụ na ụrọ ma ọ bụ ala ndị kachasị mma na saịtị gị, mgbe ahụ iji mee ka àgwà ha dị mma, ọ ga-ejikọta ájá na nkwadebe nke ala.
Ihe ịga nke ọma nke ndị na-eto eto na-adabere n'ezi osisi na ilekọta osisi ahụ, Ihe kacha mkpa bụ mmezu nke ihe niile a chọrọ mgbe ị na-eto vine na Urals. Mgbe ị na-akụ ohia, ị ga-ebu ụzọ kụọ oghere square 60 cm n'ime omimi, yana 60 cm n'obosara na ogologo. N'etiti olulu nwere ugwu drainage, nke a na-ekpuchi ya na mkpụrụ nwere akụkụ nke compost, humus na ala ubi. Ke adianade do, 150 g nke superphosphate na 400 g nke dolomite ntụ ọka na-agbakwunye na ya.
Mgbe ịkụ mkpụrụ clematis kwesịrị ịwụnye seedling n'etiti olulu na ugwu drainage ugwu. Ugbu a jiri nwayọọ gbasaa mgbọrọgwụ n'elu ụlọ ahụ ma jupụta n'ala dị njikere. Mgbe ị kụrụ osisi vaịn, ọ dị mkpa iji nwayọọ dozie ala na mpaghara osisi ahụ ma tie alaka ahụ na nkwado a kwadoro.
Ị ma? Ogo nke osisi clematis, nke miri emi ga-adi mkpa iji kwadebe olulu maka akuku ya.
Mgbe a kụrụ, a ghaghị ịme mmiri ahụ na mmiri ọkụ. Cheta na iji gbochie mkpịsị nke mgbọrọgwụ na-akpata, ọ dị mkpa iji mmiri mee ya na ụlọ okpomọkụ n'oge mbụ.
Ndị ụkọchukwu ndị na-adịghị akwụ ụgwọ ga-achọ kpọmkwem ọnọdụ maka osisi na-eto eto mgbe ọ tolitere. Osisi ahụ ga-enwe ekele dị ukwuu maka gị maka ịgbara mmiri na-enye oge, fertilizing, ịtọ ala ma kwachaa. Ilebara nwoke mara mma anya nke ọma bụ isi ihe na-emepụta okooko osisi ya. Enwere ike itinye ihe mkpuchi ala na gburugburu ohia iji mee ka e nwee àgwà ndị e ji achọpụta nke saịtị ahụ, nke ga-enye aka kpuchie mgbọrọgwụ nke osisi vaịn megide ikpo oke ọkụ n'ụbọchị anwụ na-achasi ike ma gbochie nsị mmiri ngwa ngwa.
Ndị ọkachamara na-enwe ọganihu dị mma, ga-achọ ka nzukọ nke ịgbara mmiri dị mma. Ihe na-adịghị mma bụ atọ bụ isi ihe mere na-akpata ọnwụ nke osisi ahụ. Liana na-eme ihe na-adịghị mma mgbe ọ na-azụkarị obere mmiri, nke kachasị dị ize ndụ nye ya na-asọba n'etiti ohia. Omume dị otú ahụ nwere ike iduga mmeri nke olu olu nke osisi ahụ, na, na mgbakwunye, mmiri enweghị ike ịbanye n'ime ala, ebe mgbọrọgwụ nke clematis dị.
Mgbọrọgwụ nke osisi vaịn dị oke ma dị omimi, ya mere osisi ahụ chọrọ ezigbo ịgbara mmiri: otu okenye tohia kwesịrị ịnata ọ dịkarịa ala atọ bọket mmiri n'otu oge. A na-emecha nsị ọ bụla ụbọchị anọ ọ bụla, ma ka mmiri wee ghara ịgbasa na mmiri na-emighị emeri, ma banye n'ime ala. Iji mee nke a, gburugburu ohia iji mepee oghere gburugburu n'ime 40 cm site na oke ohia. Mgbe ị na-akụ osisi, ọ ga-ekwe omume igwu obere iberibe plastik n'ime ala ma jiri nwayọọ nwayọọ wụsa mmiri n'ime ha n'oge atọ.
Clematis chọrọ iwebata nnukwu ọgwụ nke nri, nke eziokwu ahụ bụ na osisi ahụ nwere okooko osisi dị ogologo ma na-emesapụ aka, ma e wezụga nke ahụ, ọ dị mkpa maka ume maka mmezi nke ala.
Ọ dị mkpa! Cheta na a ghagh i tinye fatịlaịza na ala mgbe o na-eme ka clematis na-eto mgbe mgbe, ma n'enyeghi nta, ebe otu nchịkwa nke ihe dị iche iche nke fatịlaịza nwere ike imebi mgbọrọgwụ site na ọkụ ọkụ.
Mgbe na-eto eto clematis, ọ dị mkpa iji dochie mmeghe nke organic na ịnweta nri. A ga-eri Lian ma ọ dịkarịa ala ugboro 4 kwa oge. Tupu iwebata nri, a ghaghị ịme mmiri ahụ nke ọma, n'ihi na nke a ga-egbochi omume nke ọkụ ọkụ.
Na mgbụsị akwụkwọ, tupu ịkwadebe ohia ahụ, maka oyi, ọkpụkpụ ọkpụkpụ na 200 g kwa mita mita ka a na-atụba n'ime ala. Ihe nzuzo bụ na maka osisi zuru oke, osisi ahụ chọrọ nnukwu akụrụngwa. Enweghi ihe omuma a, akwukwo ya ga amalite agba aja aja, ohia n'onwe ya ga-akwusi imepe. I nwekwara ike ime osisi ahụ na humus.
Ị ma? A naghị atụcha ohia, nke dị na ogbooko osisi, ka ọ bụrụ nri, n'ihi na nke a ga-eme ka mbelata dị ukwuu n'oge oge okooko.
N'ebe a na-emepụta vegetative, clematis chọrọ ka fertilizing na nitrogen, ebe ọ bụ na ụkọ osisi ahụ agaghị enwe ike igosi oke mkpụrụ ndụ ya, akwụkwọ ya na okooko osisi ga-adị obere, nwere ike ịmalite ịgbanwuo odo ma ghọọ ọbara ọbara. Iji chefuo enweghi mmanụ aṅụ, ị nwere ike ịzụta mmiri nke slurry nke a tụgharịrị na mmiri ma ọ bụ na ọ bụ nnụnụ. A ghaghị ichikota nri mkpụrụ osisi na ịnweta. Liana hụrụ ammonium nitrate, urea na nitroammofosku. Na oge opupu ihe ubi, a ghakwara inye ya na potassium. N'oge a, a ghaghị iji nri potassium na-emepụta ya.
Na mbido nke oge mmiri na-ekpo ọkụ, a na-agbanye bushes na mmiri ara ehi, nke na-enyere aka igbochi ala site na mmiri.
Kwachaa bụ akụkụ kachasị mkpa nke ịkụ mkpụrụ nke clematis.. Ọ dị mkpa maka igbochi nke ndim na rejuvenation nke bushes, nakwa dị ka na-amụba ike nke okooko. N'oge opupu ihe ubi na-adịghị ike, Ome ndị dị nro na nke mebiri emebi na-enyere aka ịgbatị okooko. N'oge ọkọchị, a na-ewepụ alaka dị ntakịrị site na ohia ahụ, nke na-akpali ntoputa nke ome ọhụrụ na ịgbatị okooko.
Ihe kachasị iche iche nke clematis mgbe ha kụrụ ihe na-efu nke isi isi na-agbatị elu, n'ihi ya, a na-ehichapụ ha, na-ahapụ nanị obere buds. Ntughari a na-eme ka e guzobe ọtụtụ basal.
Mgbe ọ bụ clematis dịka Jacquesman, Vititsella, Intergrifolia, nke Ome na-etolite n'ime afọ mbụ nke ndụ, a na-ewepụ mpi ochie na mmalite oge opupu ihe ubi nke fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mgbọrọgwụ, nke na-akpali ọganihu nke alaka ọhụrụ.
N'ihi na mmepe nkịtị nke creepers kwesịrị ịkwado nkwado, nke nwere ike ịchọta arches, pyramid na ọmarịcha ihe ngosi aghụghọ. Mgbe ị na-ahọrọ nkwado, cheta ya enweghi oke ihe kariri 1 - 1.2 cm. I kwesiri iburu n'uche na, na-eto eto, Ome nwere ibu di oke mkpa, ya mere obugh ihe obula nwere ike idi ha.
Ọ dị mkpa! Mgbe ị na-ahọrọ nkwado, ịkwesighi ịgha mkpụrụ okpukpuchi na mpempe ihe na-erughị ọkara site na mgbidi brik, a ga-etinyekwa osisi ahụ n'ụzọ dị ukwuu site na nsu ígwè, ebe ọ bụ na ọnụnọ nke ụlọ ndị ahụ ga-emetụta ọganihu ya.
Ngwongwo ọla edo nke ọma nke gwuru ma gwuru na nso osisi bushes bu ezigbo nkwado maka osisi. Ọ dịghị obere mma na anya nke efere. Ụdị aghụghọ ndị dị otú ahụ ga-abụ ihe kachasị mma nke saịtị ọ bụla.
A na-eme ka Clematis gbasaa site na ịdọrọ, na-ekewa ndị bushes na grafting. Ụzọ ndị a niile bụ vegetative, ya mere na-enye gị ohere iji chebe àgwà niile dị iche iche ma nweta osisi na usoro mgbọrọgwụ ha. Ihe kachasị ewu ewu maka ndị isi na Urals bụ grafting.
A na - ekewa mkpuru osisi ndị si na ohia ka ha wee ghọọ ihe nkedo site na 8 ruo 10 cm n'ogologo ma tinye ya maka otu ụbọchị n'ime ihe ngwọta iji kpalite mgbọrọgwụ, mgbe nke ahụ gasịrị, a kụrụ ha na griin ha ma kpuchie ya na ite. Tupu mgbọrọgwụ ahụ apụta, ala a na-etinye ya na mmiri na-agba ya mmiri ma nọgide na-mmiri mmiri mgbe niile. Mgbe o pulitere nweta mgbọrọgwụ ha, a na-akụ ha maka obibi ebighi ebi.
Ọ bụghị ihe na-ewu ewu bụ nkewa nke ohia. A na-eji usoro a eme ihe mgbe osisi vaịn ahụ na-etowanye, ma ọ bụ mgbe a na-ebugharị ohia gaa ebe ọhụrụ. Ikekọrịta bushes na mmalite oge opupu ihe ubi ma ọ bụ mgbụsị akwụkwọ. Mgbe e gwuru ohia, a na-ekewa ya n'ime osisi di iche iche nke onwe ya, nke a na-akụ ya n'ala.
Novice gardeners mgba clematis site layering. Iji nweta ihe ọkụkụ, a na-etinye ụmụ osisi na-eto eto n'ime oghere ndị a kwadebere tupu ha emee ma kpuchie ụwa, na-ahapụ akụkụ elu nke oge ịse n'elu ala. Ka oge na-aga, ndị buds na-etolite, a na-esikwa na ha si na ya pụta, bụ ndị e kewapụtara site na nne na nna ahụ, kewara n'ime osisi onwe ha ma kụọ ya na olulu dị iche iche.
Na mmalite nke mgbụsị akwụkwọ, ị kwesịrị ichebara echiche esi chebe clematis na Urals site na obere okpomọkụ n'oge oyi. Iji mee nke a, na mmalite nke ihu igwe oyi, na ihu igwe oyi, wụsa ịwụ humus n'ime etiti ohia, mgbe o wepụsịrị akwụkwọ ndị dị n'okpuru osisi ahụ ma jiri ọla kọpa sulphate na-agwọ olu olu. Mgbe nke ahụ gasịrị, a na-ebute ugwu ahụ dị elu nke dị ka 15 cm na ash na ájá.
Maka nchekwa clematis bushes jiri naanị usoro akọrọ: A na-agbaji osisi nke osisi ahụ ma ọ bụ gbagọọ agba ma tọgbọrọ n'elu isi, mgbe e mesịrị, ha na-ekpuchi ya na osisi oak akọrọ, spruce alaka ma ọ bụ ụfụfụ a gbụpịara. A na-ekpuchi ya na igbe, nke a na-ekpuchi ya na ihe mgbochi n'elu ụlọ, ihe dị n'elu ụlọ ma ọ bụ ihe ndị ọzọ na-adịghị mmiri, nke a na-agbada n'akụkụ nkuku na brik ma ọ bụ nkume ma kpuchie ya n'elu ala.
Na-eto eto na ogige clematis mepee ohere imepụta ihe a na-akparaghị ókè nye onye na-ere osisi. Ma ọ bụrụ na ịnọghị umengwụ ma mee ka ọnọdụ dị mma maka osisi, mgbe ahụ naanị ole na ole nke ọka clematis ga-atụgharị ọbụna akụkụ kachasị mma nke paradaịs ahụ.
Iji mmiri mmiri na-eme ihe maka colic na ụmụ ọhụrụ. Atụmatụ, ebe ịzụta na otu esi eme n'ụlọ
Oge owuwe ihe ubi a ga-enye gị site na May Rose tomato: nkọwa na àgwà nke iche iche
Esi edozi polycarbonate na etiti metal
Copyright 2019 \_ Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa \_ Clematis na Urals: kụrụ ma lekọta